Indlwana eNgcono eNtsha yeMid-Mod enoFikelelo lwaseLwandle
Dibana noGordon, indlu yokulala ecocekileyo nenesitayile enokufikelela kunxweme lwabucala eLake Nipissing. Yenye yezindlu zangasese ezine eziyinxalenye yepropathi encinci yokuchithela iiholide 'iFinch'.
Indawo esembindini lunxweme oluthambileyo olunesanti kunye nendawo ethambekileyo enzulu yokungena kwiLake Nipissing ebonelela ngasemva kokutshona kwelanga okubalaseleyo kwehlabathi kwaye ibe bubugqi obumangalisayo kwiinyanga zasebusika. Indawo ekumbindi wohambo olufutshane ukuya kwezona ndawo zokutyela zibalaseleyo zaseNorth Bay, iLCBO, kunye negrosari.
Le ndlu intle ye-850 square foot ibandakanya indawo yokutyela, ikhitshi kunye negumbi lokuhlala elinendawo yomlilo enezihombiso zangoku eziqaqambileyo zenkulungwane yenkulungwane.
Ikhitshi esanda kulungiswa igqityiwe ngokuchukumisa i-retro-ephefumlelweyo kwaye igcwele ngokupheleleyo ukupheka.
Igumbi lokuhlala libandakanya indawo yomlilo yegesi yokuphumla kunye nokufudumala emva kokuhlwa okupholileyo kwekwindla okanye usuku lwasebusika olunekhephu echibini.
Igumbi lokuhlambela elineshawa/i-tub combo enendawo yokuhlambela eco-friendly iimveliso ezisuka kwiNkampani engaqhunyiswanga kunye ne-Oneka. Iitawuli zokuhlambela ziya kuhanjiswa kuzo zonke iilinen.
Igumbi lokulala eli-1 liquka ibhedi yokumkanikazi, igumbi lesibini liquka amawele amabini, kwaye igumbi lokugqibela linika ibhedi ephindwe kabini. Zonke iibhedi zixhotyiswe ngoomatrasi benkumbulo.
Iveranda egqunywe yabucala enendawo yokuhlala kunye neBBQ.
Ngaba ungathanda ukuhlala? Akunyanzelekanga ukuba ushiye i-cottage ene-wifi yasimahla kunye neNetflix kwigumbi lokuhlala likamabonwakude ukuze wonwabe. Inkonzo yegumbi esuka kwindawo yokutyela yaseChurchill kwidayila kuzo zonke iindwendwe zethu kubandakanya ii-cocktails ezenziwe ngezandla kunye nokhetho olunomtsalane lwewayini-ekunene kucango lwakho lwe-cottage. Ikwabandakanyiwe- i-retro ephefumlelweyo yoMdlali weRekhodi yeCrosley enengqokelela yevinyl yakudala kuba eli khitshi lenzelwe ukudanisa!
Ukufikelela kwiindawo zokuhlambela simahla, imidlalo yengca kunye nemidlalo yamanzi angeyomoto (i-kayaks, amaphenyane, ii-inflatables) ekwabelwana ngazo nezinye iindwendwe. Ulwandle luxhotyiswe ngezitulo zokuphumla, kubandakanya nedesika ejonge iLake Nipissing enetafile yomlilo werhasi. Izihlangu zesnowshoes ezibonelelwayo kwiinyanga zobusika zokuhamba ngeenyawo ecaleni kweLake Nipissing elinomkhenkce - kufuneka uzame amava ngokutshona kwelanga ngokungenakuthelekiswa nanto.
*Nceda uqaphele ipropane yeBBQ inikezelwa kuphela ukusuka nge-15 ka-Epreli-Nov 15, ngenxa yemicimbi esebenzayo kubusika bethu obubandayo. Ukuba iindwendwe zinqwenela ukwenza i-BBQ yasebusika, zamkelekile ukuzisa itanki yazo yepropane.